क्याल्सियमको बढी सेवनले पनि ग्यास्ट्रिक हुन्छ – Health Post Nepal
क्याल्सियमको बढी सेवनले पनि ग्यास्ट्रिक हुन्छ
२०७५ चैत २३ गते १५:४५
मेरो पेट पोल्छ । तीनपटक इन्डोस्कोपी, चारपटक अल्ट्रासाउन्ड गरिसकेँ, केही देखिन्न । के खाँदा र नखाँदा निको होला ?
– गणेश पोखरेल
पेट पोल्ने एउटा कारण ग्यास्ट्रिक भए पनि अन्य धेरै कारणले पेट पोल्ने गर्छ । अल्ट्रासाउन्ड र इन्डोक्कोपी कहाँ, कोबाट गराएको भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ । यस्तो अवस्थामा तपाईंले एकपटक ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजिस्टसँग परामर्श गर्नु राम्रो हुन्छ । विशेषज्ञले नहेरी परीक्षणले मात्र सबै देखिन्छ भन्न सकिन्न । यस्तो अवस्थामा तपाईं पेट पोले पनि ब्रुफिन, ब्रुसेटजस्ता पेनकिलर नखानुस् । चुरोट, रक्सी, तारेको, पोलेको खानेकुरा पनि खान भएन । सामान्यतः पेट पोल्ने, दुख्ने र फुल्ने अवस्थामा ग्यास्ट्रिक भएको आशंका गर्न सकिने भए पनि सबै ग्यास्ट्रिकमा अल्सर भए पनि दुख्छ नै भन्ने हुँदैन । ग्यास्ट्रिकको सबैभन्दा प्रमुख कारण पेटमा हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी नामका कीटाणुको संक्रमण हो । त्यसबाहेक दुखाइ कम गराउनका लागि निम्स, ब्रुफिन, ब्रुसेट, सिटामोल एनएसएआइडी समूहका औषधिको सेवनले पनि ग्यास्ट्रिक गराउँछ । तीबाहेक मादकपदार्थ, सूर्तीजन्य पदार्थको सेवन, तनाव, परसनल हाइजिन, आइरन तथा क्याल्सियमको बढी सेवनले पनि ग्यास्ट्रिक हुन्छ ।
म ६० वर्षको भएँ । २ वर्षदेखि घाँटी पोल्छ । डाक्टरले ग्यास्ट्रिक भएको भनेपछि नियमित औषधि खाइरहेको छु । सुक्खा खान छोडिदिएँ । तर पनि पोलिरहन्छ, किन होला ?
घाँटी पोल्ने प्रमुख कारण ग्यास्ट्रिक नै हो । औषधि कस्तो खाइरहनुभएको छ, झोल औषधि खाएको भए ट्याबलेट खानुपर्छ । आवश्यक भएमा डोज बढाउन पनि पर्न सक्छ । पहिला निको भए–नभएको यकिन गरेर अरु कारण खोज्नतिर लाग्नुपर्छ ।
म ३६ वर्षको भएँ । तीन–चार वर्षदेखि छाती पोल्छ । डाक्टरले एसिडको मात्रा बढेको छ भने । अहिले ओमिप्राजोल १० एमजी औषधि प्रयोग गर्छु । एसिड घटाउन के–के गर्नुपर्छ ?
तपाईंलाई ग्यास्ट्रिकको समस्या बढी भएर छाती पोलेको हुन सक्छ । तर, छाती पोल्नुको कारण ग्यास्ट्रिक मात्रै नहुन सक्छ, मुटुको कारणले पनि छाती पोल्छ । परीक्षणबाट ग्यास्ट्रिक नै पुष्टि भएको भए पहिले त्यसलाई निको पार्नुपर्छ । औषधिले ग्यास्ट्रिक घटाउँछ, तर तपाईंले लिइरहेको औषधिको डोज नपुगेर निको नभएको हो कि ! १० मिलिग्रामबाट बढाएर २० मिलिग्राम पु¥याउनुस् । त्यसपछि पनि कम नभए अन्य परीक्षण आवश्यक पर्छ ।
म ३३ वर्षको भएँ । पेटको दाहिनेपट्टि कलेजोको सीधा घरी–घरी दुख्छ । युएसजी, एब्डोमिन, सिटी, इन्डोस्कोपी, ल्याब टेस्ट र लिपिडप्रोफाइल पनि गरिसकेँ । परीक्षणका क्रममा ग्यास्ट्रिक फ्याटी लिभर, पाइलोरी पोजेटिभ देखियो । पेट कराउँछ । खाना रुच्छ तर पच्दैन । दाहिनेतर्फको भाग केही मोटो देखिन्छ । डाक्टर समस्या छैन भन्छन्, तर दुख्न छोड्दैन ।
एचपाइलोरी देखिसकेको हो भने पहिला त त्यसको उपचार भयो–भएन, त्यसका लागि एन्टिबायोटिक्स नै खानुपर्छ । पेटमा पाइलोरी नामक ब्याक्टेरिया पुगेपछि जीवनभर यो ब्याक्टेरिया रहने र ग्यास्ट्रिकको समस्या पनि रहिरहने सम्भावना हुन्छ । एकपटकको एन्टिबायोटिक्सले पनि यसलाई मार्न सक्दैन । आफ्नै प्रतिरोधी संयन्त्र बनाउने र एसिडमा पनि बाँच्न सक्ने भएकाले यो ब्याक्टेरियालाई धेरै प्रकारका एन्टिबायोटिक्स एकैपटक खाएमा मात्रै मार्न सकिन्छ । यो भाइरस पेटभित्र भएपछि अल्सर र क्यान्सर हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ । मुख बार्नु भएको छ कि छैन । फ्याटी लिभर भएमा बोसोयुक्त खाना, रक्सी खान भएन । चुरोट खानुहुन्छ भने छोडिहाल्नुपर्यो ।
मलाई पेट दुख्छ । केही दिनअघि अस्पताल गएको थिएँ । रगत जाँच्दा एच पाइलोरी पोजेटिभ देखियो र १० दिनको औषधि दिए । औषधि खाइरहँदा पनि निको भएको छैन ।
एचपाइलोरीको उपचार पहिला गर्नुपर्छ । त्यसको उपचारपछि पनि निको भएन भने पेट दुख्नुका अन्य कारण खोज्नुपर्छ । ग्यास्ट्रिकबाहेक पेट दुख्ने धेरै कारणमा मिर्गौला, पित्तथैली र नलीमा पत्थरी, प्यानक्रियाजटाइटिस हुन सक्छन् । इन्टेस्टाइनलको पत्थरीको क्षयरोगले पनि पेट दुख्न सक्छ । यी कुराहरूको राम्ररी परीक्षण गराएर कारण खोजी उपचार थाल्नुपर्छ ।